ဒူဒူကြီး: "Practical Marine Electrical Knowledge"
"Practical Marine Electrical Knowledge" စာအုပ်ပါ။ Marine Electrical Practice နဲ့ Marine Electrical Knowledge စာအုပ် (၂) အုပ်မှာ Practical Marine Electrical Knowledge စာအုပ်ဟာ ဖတ်ရတာပိုမို ရှင်းလင်း လွယ်ကူသလို၊ အခုနောက်ပိုင်းမှာ၊ ပိုမိုအကြိုက်တွေ့ကြတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူကတော့ Dennis T. Hall B.A. (Hons), C. Eng., M.I.E.E., M.l.Mar.E ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 15:09